कसरी ल्यापटप गर्न स्क्यानर जडान गर्न: शुरुआती लागि सुझावहरू
जडान बाह्य हरेक प्रयोगकर्ता सामना गर्न छ कि एक कार्य - कम्प्युटर गर्न। यस्तो जटिल मिसिन काम गर्न पनि एक साईट प्रयोगकर्ता यी कौशल विकसित। झन्, प्रयोगकर्ताहरूले कसरी आफ्नो ल्यापटप गर्न स्क्यानर जडान गर्न इच्छुक छन्। कार्य सामना के सुझाव र चाल मदत गर्न? के सबैले गर्ने व्यवहार मा विचार अनुवाद गर्न योजना एक व्यक्ति थाहा हुनुपर्छ?
स्क्यानर - एक ...
सबै को पहिलो प्रश्न जोडिएको उपकरण कस्तो बुझ्न छन्। एउटा स्क्यानर के हो? यो किन आवश्यक छ?
स्क्यानर - उपकरण भनेर डिजिटल मोड कागजातहरू अनुवाद गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, मिसिन जमानत मा राखिएको यो प्रतिहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो धेरै सुविधाजनक छ! प्राय छैन भन्दा, व्यवहार मा, यो प्रविधी मुद्रक सुविधाहरू सम्बन्धित छ।
त्यहाँ स्क्यानरहरू धेरै प्रकार छन्। उदाहरणका लागि, कालो-र-सेतो र रंग। रंग मा - तदनुसार, पहिलो मामला मा, प्रतिलिपि मात्र कालो र सेतो, दोस्रो हुनेछ। प्रत्येक प्रयोगकर्ता जो मोडेल किन्न निर्णय गर्छ। लोकप्रिय मोडेल कि रंग काम। तर कसरी एक ल्यापटप गर्न स्क्यानर जडान गर्न? यो के हुनेछ?
वास्तवमा, सबै छैन यो देखिन्छ रूपमा गाह्रो छ। स्क्यानर एक जस्तै तरिकामा ल्याप्टप जोडिएको डेस्कटप कम्प्युटर। तर यो लागि प्रयोगकर्ता एक निश्चित सूची हुनुपर्छ। यो के हो? यो के हो?
एक व्यक्ति सोच छ भने, नोटबुक गर्न स्क्यानर (र प्रिन्टर) कसरी जडान गर्न, उहाँले निम्न वस्तुहरू आवश्यक हुनेछ:
(यस मामला मा - एक ल्यापटप) चलिरहेको पीसी;
को स्क्यानर / मुद्रक गर्न USB-केबल;
उपकरणबाट शक्ति केबल जडान गर्न;
चालक संग सीडी।
कुनै सामान आवश्यक छैन। छ कुनै पनि शक्ति स्रोत (निःशुल्क आउटलेट) र एक नि: शुल्क ल्यापटप युएसबी-सकेट। नियम, सबै आवश्यक केबल र तार स्थापना सीडी संग उपकरण संग संलग्न।
एक ल्याप्टप गर्न स्क्यानर कसरी जडान गर्न? सजिलो बनाउन। पर्याप्त सानो बुझ्ने छ निर्देशनहरू, पनि एक साईट प्रयोगकर्ता पालना गर्न। यो कार्यहरूको अनुक्रम तोड्न छैन सिफारिस गरिएको छ। अन्यथा, जडान उपकरण सही काम छैन।
कसरी ल्यापटप एचपी स्क्यानर वा अन्य कुनै पनि जडान गर्न? यो आवश्यक छ:
यो बक्स हटाउँदै, र त्यसपछि मानिसहरूलाई लागि सुविधाजनक ठाउँमा यो ठाँउ हो। राम्रो बस स्क्यानर लागि छुट्टै ठाउँ पाउन।
बक्समा प्रयोगकर्ता शक्ति कर्ड, USB-केबल र चालक डिस्क पाउनुहुनेछ (कहिले काँही यो स्क्यान गरिएको तस्बिरहरू काम गर्न थप सफ्टवेयर छ)। यी वस्तुहरू सबै हटाइएको र अनप्याक हुनुपर्छ।
ल्याप्टप / कम्प्युटर अन गर्नुहोस्। यो अपरेटिङ सिस्टम लोड लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ।
नेटवर्क गर्न स्क्यानर गर्ने शक्ति कर्ड जडान, र त्यसपछि।
एक ल्यापटप वा कम्प्युटर संग युएसबी-केबल प्रयोग गरेर उपकरण जडान गर्नुहोस्।
को स्क्यानर खोल्नुहोस्। आधुनिक सञ्चालन प्रणाली मा स्वतः चालकहरुको लागि खोजी हुनेछ। उहाँले सामान्यतया विफलता मा समाप्त हुन्छ।
कम्प्युटर मा ड्राइभर डिस्क (डीभिडी वा सीडी-रोम मा) सम्मिलित गर्नुहोस्। जडान उपकरण पहिचान गर्न आवश्यक सफ्टवेयर राख्न स्थापनाकर्ता को निर्देशनहरू निम्न।
को चालक नोटबुक मा स्थापित एक पटक जडान स्क्यानर पहिचान हुनेछ। तपाईं उपकरण संग काम गर्न सक्छन्।
यो स्क्यानरहरू वा मुद्रकहरू जडान को कार्य लागू गर्दा पछ्याउन सिफारिस कार्यहरू एक यस्तो अल्गोरिदम छ। तपाईं पहिलो ड्राइभर स्थापना सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि जडान उपकरण सक्रिय। तर यो मामला मा प्रतीक्षा उहाँले त्यसो गर्न प्रयोगकर्ता "सोध्न" initializer सम्म हुनेछ।
यो मात्र परिदृश्य छैन। झन्, प्रयोगकर्ताहरूले कसरी चलाउनु बिना आफ्नो ल्यापटप गर्न स्क्यानर जडान गर्न इच्छुक छन्। यसलाई त्यसो गर्न पनि सम्भव छ?
हो। साँच्चै, समय डिस्क हराउन सक्छ। यो स्क्यानर वा मुद्रक अब जडान हुनेछ कि होइन। स्थापना डिस्क संग वितरित गर्न, तपाईं एक रोचक प्रविधी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी इन्टरनेटबाट आवश्यक चालक डाउनलोड गर्ने बारेमा कुरा गर्दै छन्। जीवन विचार ल्याउन, तपाईँले गर्नुपर्ने:
यसलाई प्रयोग गर्न चाहने मुद्रक वा स्क्यानर निर्माता को वेबसाइट मा जानुहोस्।
मेनु को एक विशेष प्रकार जडान उपकरण, त्यसपछि विशिष्ट उपकरण मोडेल चयन गर्नुहोस्। यो लिखित छ स्क्यानर र खरीद गरिएको छ जो बक्स, र।
को कार्यान्वयन फाइल (.exe ढाँचा) डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै छ। र के कार्यहरू त्यसपछि द्वारा लग्नु गर्नुपर्छ? यदि एक चालक डिस्क छ कसरी एउटा स्क्यानर वा कम्प्युटरमा एउटा मुद्रक जडान गर्न?
स्थापना गाइड ड्राइव बिना
समग्र प्रक्रिया बाट पहिले दिइएको अल्गोरिदम छैन धेरै फरक छ। कसरी स्थापना डिस्क बिना आफ्नो ल्यापटप गर्न स्क्यानर जडान गर्न? यो आवश्यक छ:
एक सुविधाजनक ठाउँमा उपकरण राखे।
तपाईंको ल्यापटप एक USB-केबल प्रयोग र शक्ति केबल गर्न मुद्रक स्क्यानर / जडान गर्नुहोस्।
कम्प्युटर र तपाईंले प्रयोग गर्न योजना उपकरणमा गर्नुहोस्।
पहिले डाउनलोड कार्यान्वयन फाइल चलाउनुहोस्। यो ड्राइभर डिस्क लागि विकल्प रूपमा सेवा गर्दैछन्।
स्थापनाकर्ता को निर्देशनहरू निम्न, हार्डवेयर चालक स्थापना गर्नुहोस्।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा समाप्त हुन्छ। एक विशेष उपकरण मोडेल को लागि एक चालक डाउनलोड गर्न - मुख्य कुरा। अन्यथा, स्थापना सफ्टवेयर परिणाम ल्याउन छैन।
ग्राफिक्स कार्ड को प्रतिस्थापन कस्तो छ
निगरानी बेनक्यू G925HDA: वर्णन, सुविधा र समीक्षा
बहु-कोर प्रोसेसर: को सिद्धान्त
सिस्को राउटर: विवरण
को कलम के छ र यो के गरिन्छ?
आफ्नो हात संग वेब क्यामेरा बाट माइक्रोस्कोप कसरी बनाउने?
पालन गर्न कसरी पोस्ट? उद्देश्य र उपवास को अर्थ
मेथोडिस्ट - आधुनिक शिक्षा प्रणाली मा एक प्रमुख तत्व
बच्चा कस्तो छ?
Depilation चीनी: कसरी गर्न
खेल "बनाउनुहोस् माथि बार्बी"। लाभ वा मेरो छोरी लागि हानि?
स्वस्थ फिर्ता - एक सफल र स्वस्थ जीवन प्रमुख
दबाइ "प्रेस्टिज" आलु को प्रक्रिया को लागि: भरोसा, तर प्रमाणित
सपना व्याख्या: मेरी हजुरआमा मरेका के सपना? व्याख्या सपना